Khiyaanada baraha internetka - BBC News Somali
Khiyaanada baraha internetka
13 Maajo 2011
Baraha bulshada waxa ay ujeedadoodu tahay in dadka ay xiriiraan kuwo aad taqaan iyo kuwo aad ku kalsoon tahay taasi oo ka dhigta adeegga barahaasi sida Facebook oo kale meelo ay bartilmaameedsanadaan dadka khayaanada sameeya ee dadka kale iska dhiga.
Xadiga dhibaatadan ayaa waxa lagu soo bandhigay warbixin lixdii biloodba mar la sameeyo oo dhinaca ammaanka sirdoonka qaabilsan taasi oo ay sameyso shirkadda weyn ee dhinaca computerada ee Microsoft.
Akhbaar laga soo uruuriyay 600 oo milyan oo computero ah ayaa warbixintu waxa ay sheegeysaa in baraha internetka ee bulshada inay u tahay meel fursadow anaagsan ay ka heli karaan dadka wax ku khiyaanna internetka.
Warbixintu waxay sheegtay in 1200 boqolkiiba ama 12 jibaar inay kordheen weerarada dhinaca internetka ee dhacay 12 bilood ee ugu danbeeyay.
Weerarada noocan ah ayaa inta badan waxa ay u dhacaan qaab fariimo u eg inay sax yihiin oo inta badan ka yimaad qof uu qofka isticmaalaya uu aqoon u leeyahay ama asxaabtiisa ah, taasi oo ku qalqaalineysa inay siiyaan akhbaar faa'iido wanaagsan u leh kooxaha dambiilayaasha ah.
Warbixintu waxa ay tilmaantay laba meelood oo ay u badan tahay dhibaatadu, waa mid e in ay kordheen khiyaanada la xiriirta qeybo yaryar oo ku saabsan xogta shaqsiyadeed ee qofka oo laga soo dhexsaaro tiro badan ood ad ah.
Mida kale waxa ay tahay inay korortay iyana khiyaanada farsamada sare leh ee tiknoolajiyada loo isticmaalo oo la xiriirta qalabka software oo inta badan ku wajahan in lacago badan laga helo shaqsiyaad gaar loo baltilmaameedsado.
Qodob kale oo Salaamaha ah